Zimbabwe ruling party Zanu-PF in mass recruitment drive in SA – The Zimbabwe Mail
HomeZimbabweZimbabwe ruling party Zanu-PF in mass recruitment drive in SA
Zimbabwe ruling party Zanu-PF in mass recruitment drive in SA
February 11, 2020 Staff Reporter Zimbabwe 0
Zanu PF’s spokesperson in South Africa Kennedy Mandaza. Picture: Jonisayi Maromo/African News Agency (ANA)
Pretoria – Zimbabwe’s ruling Zanu-PF party has embarked on a mass mobilisation drive on the streets of neighbouring South Africa, as the former liberation movement targets five million registered voters by the next national elections in 2023.
The state-owned Herald newspaper reported that Zanu-PF, which is aiming to secure 65 percent of the vote at the polls, had established a database of its members living outside Zimbabwe’s borders to create a direct link between party headquarters and structures outside the country.
Zanu-PF spokesman in South Africa Kennedy Mandaza told the newspaper that a party meeting in Johannesburg last week attracted over 30 new members who joined its diaspora structures.
Several Zimbabwean civic groups and political parties have representation in South Africa, home to millions of Zimbabweans who fled political strife and an economic meltdown back home.
The leader of the People’s Progressive Party of Zimbabwe (PPPZ), Pastor Timothy Chiguvare, says he has for many years advocated for the rights of his compatriots based in South Africa.
“Well before 2016, our party has gone international via social media networks with a PPPZ official message appealing to all Zimbabweans and former Zimbabweans in the diaspora to come aboard the PPPZ’s glorious victory train,” Chiguvare told African News Agency in Pretoria.
Zimbabwe’s former foreign affairs minister Walter Mzembi, now also based in South Africa, has been appointed interim president of a new political formation, the People’s Party.